तपाईंलाई कति कित्ता पर्ला रसुवागढी र साञ्जेनको शेयर ? यस्तो छ हिसाब « Clickmandu
तपाईंलाई कति कित्ता पर्ला रसुवागढी र साञ्जेनको शेयर ? यस्तो छ हिसाब
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १०:२७
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका दुई सहायक जलविद्युत् कम्पनीले आजदेखि सिमित साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ ।
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले आजदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । यी दुई कम्पनीले पहिलो चरणका कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताका लागि साधारण शेयर विबक्री गर्न लागेको हो ।
दुई कम्पनीको कूल २ अर्ब ५१ करोड ६० लाख बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्न लाग्दा कति कित्ता शेयर पर्ला भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ ।
ती दुवै आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी भएकाले कोषमा कार्यरत कर्मचारीले भने अरु सञ्चयकर्ताको तुलनामा बढी शेयर पाउने छन् । सञ्चयकर्ताले साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको बढीमा ३०० कित्ता शेयर आवेदन गर्न सक्नेछन् भने
रसुवागढीका लागि बढीमा ५०० कित्ता शेयर आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोषका कर्मचारीले भने दुई हजार ५०० कित्तासम्म साधारण शेयरमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।
सो कम्पनीको शेयरमा सञ्चयकोषका करिब ८ लाख ६८ हजार ३९५ जना सञ्चयकर्ताले आवेदन दिन पाउनेछन् । यस आधारमा हिसाब गर्दा एक सञ्चयकर्ताले करिब २० कित्ता शेयर पाउने सम्भवना रहेको छ ।
सो कम्पनीको शेयरमा ७ लाख २९ हजार ७६१ जनाले आवेदन गर्न पाउनेछन् । त्यस आधारमा हेर्दा सो कम्पनीको १२ कित्ता शेयर पर्ने सम्भवना रहेको छ ।